Top 5 Loại Micro không dây Tốt Nhất Hiện Nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Loại Micro không dây Tốt Nhất Hiện Nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Loại Micro không dây Tốt Nhất Hiện Nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Uyakwazi ukukhuluma imibhobho engenantambo ingenye yemikhiqizo esetshenziswa kakhulu namuhla futhi ebaluleke kakhulu ezenzweni noma ngezikhathi zokucula emndenini. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu oqonda kahle ngalolu hlobo lomkhiqizo ukuze akwazi ukwenza ukukhetha okungcono kakhulu nokufaneleka kakhulu. Masifunde indatshana engezansi ukuze sifunde kabanzi ngalo mugqa womkhiqizo wombhobho!
1 Izici eziyisisekelo zemikhiqizo yemakrofoni engenantambo
2 Ukuhlukaniswa nokwakheka kwamakrofoni angenantambo
2.1 Ungawahlukanisa kanjani amamakrofoni angenantambo anamuhla?
2.2 Ukwakheka kwemikhiqizo yemakrofoni engenantambo
3 Izinhlobo ezidumile zemakrofoni engenantambo
3.1 Shure imakrofoni engenantambo
3.2 Imakrofoni ye-Sony engenazintambo
3.3 I-Arirang imakrofoni engenantambo
3.4 Imakrofoni ye-Bose engenantambo
4 Ungakhetha kanjani ukuthenga imakrofoni engcono kakhulu engenantambo namuhla
4.1 Ukuvama kwemakrofoni engenantambo
4.2 Ukukhetha imakrofoni engenantambo esekelwe kubhethri
4.3 Qaphela ukuzwela kwemibhobho engenantambo
4.4 Imakrofoni engenantambo ilungele noma iyiphi isistimu yomsindo
5 Amamakrofoni ahamba phambili angu-5 ahamba phambili angenantambo okufanele uyazi
5.1 Shure UGX8 II Wireless Microphone
5.2 Arirang WMU 3600 . Wireless Microphone
5.3 I-Takstar X6 UHF Wireless Microphone
5.4 Imakrofoni engenantambo i-VinaKTV USS 1000 Plus
5.5 Imakrofoni engenantambo i-AAP M8II
Izici eziyisisekelo zemikhiqizo yemakrofoni engenantambo
Imakrofoni yaziwa nangokuthi imakrofoni yomsakazo ukuze ihlukanise kumakrofoni anentambo. Le divayisi engenantambo izoqala ukudlulisa umsindo womculi isuka kumakrofoni iye kwamanye amadivaysi afana nama-amps nezimbali. Amamakrofoni angenantambo ngokuvamile azoba amamakrofoni angenayo intambo exhuma imakrofoni kumamukeli njengeamplifier noma enye idivayisi yokurekhoda umsindo.
Imakrofoni yomsakazo izosebenzisa amabhethri angu-9V noma AA futhi ukulungiswa kwebhendi kulinganiseke kakhulu kusukela ku-20Hz – 20KHz, ngakho-ke umsindo ucace kakhulu ngisho noma imakrofoni ibekwe kude, umsindo usalokhu ucace kakhulu futhi uthembekile kakhulu. Imakrofoni inokuzwela okuhle kakhulu komsindo futhi ingathathwa ukude. Namuhla, le microphone engenantambo isetshenziswa kakhulu emkhakheni wezokuzijabulisa, ama-fairs namakhonsathi amahle omndeni.
Ukuhlukaniswa nokwakheka kwamakrofoni angenantambo
Njengamanje, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamakrofoni angenawaya ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhetha umkhiqizo ofaneleka kakhulu. Ngokulandelayo:
Ungawahlukanisa kanjani amamakrofoni angenantambo anamuhla?
Amamakrofoni angenantambo namuhla ahlukaniswa ngokucace kakhulu ngezinhlobo ezintathu ezihlukene. Imininingwane:
I-Mic ephathwa ngesandla: Lena idivayisi evame ukusetshenziswa kakhulu ye-karaoke. Le makrofoni inomzimba omkhulu ukuze kuxhunywe isidlulisi nebhethri.
I-Plug-in Mic: Lesi yisamukeli esibekwe phansi, ngakho-ke imakrofoni evamile izoguqulwa ibe imakrofoni engenantambo elula.
Imakrofoni: Lolu cingo luvame ukusetshenziswa ezinhlelweni zikamabonakude. I-Mic inebhokisi elincane futhi iqukethe izingxenye zokudlulisa umsindo. Leli bhokisi lizonamathiselwa ngqo okhalweni lomsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, le sethi yemakrofoni izoba nombhobho owengeziwe oxhunywe ebhokisini ngekhebula elincane. Imakrofoni ngokuvamile izonamathiselwa kukhola noma igqokwe endlebeni yomsebenzisi.
Xem Thêm Lỗi không tìm được bạn bè quanh đây trên zalo | Muasalebang
Ukwakheka kwemikhiqizo yemakrofoni engenantambo
Ukwakheka kwalo mbhobho nakho kuyathakazelisa ngokukhethekile futhi kufundwe ngabasebenzisi abaningi. Ngokulandelayo:
Umamukeli uyidivayisi ebalulekile yemakrofoni engenantambo. Nokho, abantu abaningi basadidekile nomamukeli wekaraoke noma umamukeli onezinkinobho eziyisisekelo ezifana nenkinobho yokuvula/yokuvala kanye nenkinobho yokulawula ivolumu. Ngemuva komamukeli, ngokuvamile kunamaseli azoxhumeka ezimbobeni, izintambo zesignali nezintambo zamandla. Ngaphezu kwalokho, kuye ngemodeli yemakrofoni, umamukeli uzoba nemiklamo ehlukene, ubuchwepheshe nezici.
Izandla zamakrofoni ezijwayelekile zizoba nezandla ezi-2, kodwa kukhona nezinhlobo ezinesandla esisodwa kuphela. Abasebenzisi badinga ukubheka ngokucophelela lapho bethenga ngoba lokhu kuthathwa njengengxenye ebalulekile. Idizayini yesibambo semakrofoni nekepisi yemakrofoni yenziwe ngensimbi engagqwali futhi izici zithole ngokuzenzakalelayo igagasi elifanele “i-clean wave”, eligwema ngempumelelo ukuphazamiseka.
Esandleni sombhobho ngokuvamile kuzobonisa umbukiso wamapharamitha futhi kubandakanye imvamisa nenombolo yamashaneli eziteshi nezinga lebhethri. Inkinobho yokuvula/ukuvala ngezansi nayo ilula kakhulu. Imakrofoni izothwebula ngokuqondile futhi yamukele izwi lomsebenzisi.
Intambo yamandla e-adaptha ivamise ukusetshenziselwa ukuxhuma umamukeli kumthombo wamandla futhi wonke amasethi e-mic kufanele abe nentambo yamandla ngoba ukuze imakrofoni isebenze ngokuzinza, kufanele ibe nentambo yamandla.
Ama-antenna amadivayisi angathinta ukusebenza kwemakrofoni. Ukusebenza kwemakrofoni kuzoncika kumamukeli kanye ne-antenna kanye nokunquma ukuthi ibanga likude noma liseduze.
Izintambo zomugqa zivame ukusetshenziselwa ukuxhuma umamukeli ku-amplifier. Lo mugqa usiza ukwamukela umsindo futhi usiza isistimu yomsindo wekaraoke yomsebenzisi ukuthi isebenze ngokuzinzile futhi yandise ukusebenza kahle. Amamakrofoni angenantambo ngokuvamile azoba nentambo yolayini wetheminali engu-6 gauge engu-2 efakiwe.
Le cushion yerabha ivimbela imakrofoni ukuthi ingagingqiki lapho ibekwe endaweni ethile eyisicaba futhi iyivimbele ukuthi ingawi noma yonakale.
Izinhlobo ezidumile zemakrofoni engenantambo
Njengamanje, izinkampani ezidumile zamakrofoni ezingenantambo zinikeza izinsiza eziningi zamakrofoni eziwusizo kakhulu futhi ezinhle kubasebenzisi. Ngokulandelayo:
Shure imakrofoni engenantambo
Umbhobho ka-Shure ongenantambo wenziwa e-US futhi unezici ezihlukahlukene, ngakho uhlala wenelisa abasebenzisi. Ngokuqondile:
Isebenzisa ubuchwepheshe bokuqopha besimanje.
Isihlungi esihlakaniphile sokususa ngempumelelo umsindo ongemuva ngomsindo ocacile nobukhali.
Hlanganisa izici ezihlukahlukene ukuze ulethe ukusebenza kahle okuphezulu.
Izinto ezisezingeni eliphezulu nokuqina komkhiqizo ophezulu.
Ingxenye yamanani athengekayo futhi ifanele abathengi
Izinhlobonhlobo zamamodeli wemikhiqizo eminingi kufanele zikwazi ukukhulisa ukukhetha kubasebenzisi.
Imakrofoni ye-Sony engenazintambo
I-Sony ingenye yemikhiqizo eyaziwa kakhulu esezingeni eliphezulu nekhwalithi ephezulu yokulalelwayo nokubonwayo. Kungakho ama-microphone angenantambo akwa-Sony nawo aziswa kakhulu ngabasebenzisi ngokusebenza kahle kwawo, okuhlanganisa:
Ukuzwela okuphezulu komsindo omuhle nongokoqobo kanye nekhono lokuqopha imakrofoni enemininingwane.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bomsakazo we-UHF, ukudluliswa komsindo kuzinzile futhi kusebenza ngempumelelo.
Umklamo womkhiqizo unobukhazikhazi ngokwedlulele, usemfashinini futhi uyinkimbinkimbi ngokwedlulele.
Imikhiqizo yemakrofoni ka-Sony engenantambo isesigabeni senani eliphezulu.
Xem Thêm Top 20 bài hát tiếng Anh cho bé được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang
I-Arirang imakrofoni engenantambo
I-Arirang iwumkhiqizo womkhiqizo osebenza ngokukhethekile ezintweni ezilalelwayo futhi ephuma phambili emikhiqizweni efana nabamukeli, izipikha noma imakrofoni. Imakrofoni engenantambo ka-Arirang ukuze inikeze izidingo ezisebenza kahle kakhulu zekaraoke:
Ikhwalithi yomsindo ecacile necacile enomsindo omkhulu.
Ukuxhumeka kwenethiwekhi, uhla lokusebenza oluzinzile futhi olubanzi.
Impahla encane iqinile futhi imelana nomthelela.
Ingxenye yemikhiqizo yemakrofoni engenantambo nayo ibiza kakhulu.
Imakrofoni ye-Bose engenantambo
Imakrofoni ye-Bose engenantambo ingenye yemikhiqizo yohlobo lwaseMelika evelele. Ngokulandelayo:
Ikhono lokubamba umsindo lihle, lizwela kakhulu futhi akukho ukuphazamiseka.
I-transmission inamandla, izinzile futhi ayinakuphazamiseka.
Uhla olubanzi lokusebenza nokuxhumana okuzinzile.
Izici zisekela ukusebenza kahle futhi zithuthukisa ikhwalithi yomsindo.
Ingxenye yamanani ihlukile futhi ihlangabezana nezidingo zabasebenzisi.
Ungakhetha kanjani ukuthenga imakrofoni engcono kakhulu engenantambo namuhla
Indlela yokukhetha ukuthenga imakrofoni nayo idlala indima ebaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukusebenzisa idivayisi ngendlela engcono kakhulu. Ngokulandelayo:
Ukuvama kwemakrofoni engenantambo
Le mvamisa idlala indima ebaluleke kakhulu lapho abasebenzisi bekhetha imibhobho ye-karaoke engenantambo. Ngenxa yokuthi ubuchwepheshe banamuhla buthuthuka ngokushesha, amaza asetshenziswa kumakrofoni e-karaoke angenawaya nawo athuthuke kancane kancane kwikhwalithi efana namafrikhwensi e-AM, VHF kanye ne-UHF, ama-microwaves noma imisebe ye-infrared iyona esetshenziswa kakhulu namuhla. Ngakho-ke, uma ungumuntu owazi kahle imininingwane, ngeke kusadingeka uqine ekukhetheni imakrofoni engenantambo.
Ukukhetha imakrofoni engenantambo esekelwe kubhethri
Ibhethri laziwa njengomthombo wamandla ukugcina ukusebenza kwanoma iyiphi idivayisi, hhayi le makrofoni kuphela. Nokho, ngamadivayisi wombhobho angenawaya, umthamo webhethri udlala indima ebaluleke kakhulu. Impela umsebenzisi uzokhungatheka kakhulu ngenkathi ecula kodwa umbhobho ngokuzumayo awusebenzi ngoba ibhethri liyaphela futhi uzokhungatheka kakhulu ngenxa yokushintsha njalo ibhethri yombhobho. Ngakho-ke, abasebenzisi kufanele bakhethe imakrofoni ye-karaoke engenantambo enempilo yebhethri enkulu futhi ekwazi ukufika emahoreni ayi-10, ngokuvamile imakrofoni engenantambo esebenzisa amabhethri e-AA amabili.
Qaphela ukuzwela kwemibhobho engenantambo
Ukuzwela kombhobho okungenantambo ukubonwa komsindo osuka kumculi nokudluliselwa kwesignali yomsindo kuamplifier ngezindlela ezihlukene. Amamakrofoni angenazintambo ngaphandle kokuzwela okuphezulu ngokuqinisekile ngeke akwazi ukuthwebula zonke izimpawu zezwi zomculi ngokwakhe. Lokhu kusho nokuthi akwenzeki ukuqinisekisa ukuthi izwi lomsebenzisi licacile futhi lithembekile. Ngakho-ke, ukukhetha kwemakrofoni engenantambo nakho kudinga ukuhlotshaniswa nokucatshangwa kwesihlungi somsindo wemakrofoni.
Xem Thêm Top 7 bình lọc nước gia đình an toàn tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Imakrofoni engenantambo ilungele noma iyiphi isistimu yomsindo
Esinye iseluleko sokukhetha i-microphone engenantambo engcono kakhulu ye-karaoke yasekhaya ukuthenga imakrofoni eza nesethi. Amakheli amaningi ahlinzeka ngezinto zomsindo ngokuvamile anesethi ye-karaoke yomndeni exutshwe ngaphambili. Kulawa masethi, okokusebenza kuye kwacutshungulwa ngokucophelela ngaphambi kokuba kuhlanganiswe. Ngakho ikhwalithi yomsindo ihlale isezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, ngalawa masethi, kuqinisekisiwe ukuthi kulula kakhulu kubasebenzisi ukuhlola kokubili i-karaoke namakrofoni aculayo ngokuhambisana. Kusukela lapho, abasebenzisi bazokwazi ukuhlola futhi banikeze imizwa yabo mayelana nekhwalithi yomsindo yawo wonke amalungu ngokujwayelekile kanye nekhwalithi yamakrofoni angenantambo ikakhulukazi.
Amamakrofoni ahamba phambili angu-5 ahamba phambili angenantambo okufanele uyazi
Njengamanje, imikhiqizo yemakrofoni engenantambo emakethe nayo ihluke kakhulu enamamodeli nemiklamo eminingi ehlukene. Nazi eziphezulu ezingu-5 umbhobho best Ngokulandelayo:
Shure UGX8 II Wireless Microphone
I-Shure yaziwa njengophawu oludume kakhulu olusebenza ngokukhiqiza imibhobho evela e-US futhi ithenjwa kakhulu abantu abaningi. Imakrofoni engenantambo ye-Shure UGX8 II iwumugqa wombhobho wakamuva wezinga eliphezulu kanye nenguqulo ethuthukisiwe yochungechunge oludumile lwe-Shure UGX8. Ngakho-ke, lo mkhiqizo uzuze njengefa futhi wakhuthaza izinzuzo eziningi zemakrofoni yangempela.
Arirang WMU 3600 . Wireless Microphone
Isici esivelele kakhulu salo mugqa wamakrofoni angenantambo ukusetshenziswa kwamaza e-UHF, ubude obufushane bamaza namaza aphezulu. Yilobu buchwepheshe besimanje kakhulu ukuhlinzeka ngokudluliswa komsindo okuchwepheshile. Imvamisa ye-UHF inika ukusebenza okubanzi, futhi ngaphakathi kwerediyasi engama-60m, inganyakaziswa kalula. Umamukeli wocingo futhi unokuzwela okuphezulu kakhulu futhi angathwebula ikhwalithi yomsindo enemininingwane eminingi, ephezulu necace kakhulu.
I-Takstar X6 UHF Wireless Microphone
Uma ufunda nge-Takstar X6, abasebenzisi abaningi bahlatshwa umxhwele amazinga okungowalo makrofoni. Lokhu kuthathwa njengohlobo lombhobho oluqinisekiswe umthetho we-EU futhi oluvunyelwe futhi ukuzungeza ngokukhululeka. Ngaphezu kwalokho, le makrofoni iphinde yaqinisekiswa ukuthi ilandele izinqubo zamazwe ngamazwe ze-ISO zekhwalithi yomkhiqizo kanye nokuphepha kwemvelo.
Imakrofoni engenantambo i-VinaKTV USS 1000 Plus
I-VinaKTV USS 1000 Plus igqama ngombala wayo oyisiliva owubukhazikhazi kanye nendawo engaphezulu eyenziwe nge-aluminiyamu egayiwe elwa nokugqwala futhi imelana ngempumelelo nokuklwebheka. Hhayi nje ukuba nedizayini enhle, kodwa futhi ubonisa abasebenzisi ikhwalithi yomsindo omuhle kakhulu lapho bedlala esiteji nasetiyetha yobungcweti noma besetshenziswa kumasethi e-karaoke omndeni kanokusho. Lokhu kuthathwa njengolayini wemakrofoni odumile futhi waziswa kakhulu ezilinganisweni ezinhle kakhulu zamakrofoni we-karaoke namuhla.
Imakrofoni engenantambo i-AAP M8II
Lo mbhobho awugcini nje ngokunqoba abasebenzisi ngomklamo wawo omuhle, kodwa futhi unekhwalithi yomsindo enhle kakhulu eboniswa ngokucacile kumanothi aphansi naphezulu ukuze kwandiswe ikhono lawo ngisho nalapho abantu bengalaleli. Akuthathi umzamo omkhulu kakhulu ukuthatha umoya omude. uma kucula.
Okwamanje umkhiqizo ngamunye imibhobho engenantambo Wonke anemisebenzi eminingi kanye nomklamo ovelele. Akukhona lokho kuphela, le divayisi iphinde iqinisekise ukunethezeka, ubumnandi kanye nokuthokozela kwabasebenzisi. Uma uzibuza ukuthi yimuphi umkhiqizo ongawukhetha, ungabheka kumugqa we-microphone ongu-1 we-5 oshiwo esihlokweni esingenhla. Noma ungakhetha I-VinaKTV USS 1000 Plus – Lona omunye wemikhiqizo abasebenzisi abaningi abayithandayo futhi abakhetha ukuyisebenzisa ngokudumile.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-4.188, ukuvakashelwa okungu-22 namuhla)
Tổng hợp 10 cách làm trứng cút kho ngon miệng đậm đà dễ làm cho bữa cơm | Muasalebang
[Review] Top 10 Nước Tẩy Trang nào tốt cho da nhất hiện nay | Muasalebang